Author Topic: SC court order to nullify VP Paramananda Jha - Historical document (Read 16789 times)
« Reply #20 on: September 24, 2009, 01:24:19 AM »
विवादित झन्डा झिकेकै राम्रो
विवादित झन्डा झिकेकै राम्रो परमानन्द झा, (निष्क्रिय उपराष्ट्रपति)
४ गते मैले दिउँसो १ः३० बजे नै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राखिसकेपछि ४ बजेदेखि शपथ गराउन मलाई कुरिरहनुको औचित्य थिएन । यो सबै मलाई दोषरोपण गर्ने र मलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले गरिएको नाटक हो ।
अदालतको फैसला अनुसार तपाईंको उपराष्ट्रपतिको पद निष्क्रिय रहेको र सरकारले राष्ट्रिय झन्डा र सैनिक सुरक्षा कटौती गरेको अवस्थामा तपाईंले दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
भदौ १४ गतेदेखि घरबाट बाहिर निस्किएको छैन । पहिले पनि घरबाट कार्यालय गएर ४-५ घन्टा बहादुर भवनमा बिताउनेबाहेक कुनै काम त थिएन । कार्यालयमा गर्ने भेटघाटका काम अहिले निवासमै गरिरहेको छु । एक किसिमले आफूलाई नजरबन्दको अवस्थामा पाएको छु । अहिले म बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीको जस्तो अवस्थामा रहेको छु । म घरमै बसिरहेको भएर बम हाल्नेले पनि घर मै ताकिरहेका छन् । बाहिरफेर निस्किएको भए त्यही ठाउँमै हान्थे होलान् ।
यसरी बन्दीजस्तो भएर घरमै बसिरहनु पर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
मलाई अहिले आनन्द भइरहेको छ । कुनै दुःख र अप्ठयारो अनुभव भएको छैन । यसबीचमा बाहिर जानुपर्ने कुनै जरुरी काम पनि परेको छैन, त्यस्ता काम परेमा बाहिर निस्कन कसैले प्रतिबन्ध पनि लगाएको छैन । केही व्यक्तिले बोलाएका थिए, आफ्नै इच्छाले नआउने भनिदिए । सरकारले सुविधा कटौती गरे पनि दुइ छाक साग रोटी खान मेरो न्यायाधीशको पेन्सनले पुगेको छ ।
राष्ट्रिय झन्डा र सैनिक सरक्षा खोसिएपछि अपमानबोध भएर बाहिर ननिस्किनु भएको हो ?
मैले कुनै अपमानबोध गरेको छैन । परिवर्तन हुन लागेको विवादित झन्डा घरमा राख्नु र गाडीमा हल्लाउँदै हिँड्नुभन्दा झिकेकै राम्रो । अहिले सरकारले भन्डा झिके पनि मेरो अन्त्यपछि मेरो वशमा त पहिलो उपराष्ट्रपतिको नाताले त्यही झन्डा ओढाउँछ होला । यो सबै सरकारले सोच्ने कुरा हो । म त जनताको छोरो, झन्डा भए पनि नभए पनि, सैनिक सुरक्षा दस्ता भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन । जहाँसम्म हैसियतको कुरा छ, म अहले पनि उपराष्ट्रपति नै हुँ । मलाई संविधानसभाका छ सय १ जना सभासद्ले चुनेर पठाएका हुन्, कसैले टीका लगाएर पठाएको हैन । जसले पठाएको हो, उसले निर्णयनगर्दासम्म मेरो उपराष्ट्रपति पद कसैले खोस्न सक्दैन ।
तपाईं नेपालीमा पुनः शपथ नखाने भएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भदौ १४ गते किन घन्टौं कुराउनु भएको ?
नेपालीमा पुनः शपथ लिने सम्बन्धमा मेरो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग दुइ पटक र प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग तीन पटक भेट भएको थियो ती सबै भेटमा मैले आफ्नो अडान स्पष्ट रुपमा राखेको थिएँ । १४ गते बिहान मधेसी दलको प्रतिनिधित्व गरेर केही नेता र मन्त्री मेरो निवासमा आउनुभएको थियो । उहाँहरूले मैथिलीमा शपथ लिन सुझाव दिनुभयो । मैले मैथिलिमा लिन भन्ने उहाँहरूको आधिकारिकता के हो भनेर प्रश्न गरें ।
पहिला हिन्दीमा लिँदा विवाद भइरहेकोमा अदालतले नेपालीमा लिन भनेको स्थितिमा मैथिलिमा लिँदा फेरि विवाद आउन सक्ने भनाई मैले राखें । त्यसपछि उहाँहरू फर्किनुभयो । १४ गते मैले दिउँसो १ः३० बजे नै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राखिसकेपछि ४ बजेदेखि शपथ गराउन मलाई कुरिरहनुको औचित्य थिएन । यो सबै मलाई दोषरोपण गर्ने र मलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले गरिएको नाटक हो ।
« Reply #21 on: December 24, 2009, 01:18:25 PM »
'१४ जेठभित्र संविधान बन्दै बन्दैन'
24/12/2009 Naya Patrika
निस्क्रिय उपराष्ट्रपतिको ठोकुवा
नेपाली भाषामा शपथग्रहण नलिएका कारण सर्वाच्च अदालतबाट 'निस्क्रिय' बनाइएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पूर्वनिर्धारित १४ जेठभित्र संविधान नबन्न ठोकुवा गरेका छन् ।
लामो समयपछि राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय झन्डा र उपराष्ट्रपतिलाई दिइने सुरक्षाविना सहभागी भएका उपराष्ट्रपति झाले तोकिएको समयमा संविधान नबने संविधान संशोधन गरी म्याद थप्न सकिने या वर्तमान संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना संकटकाल लगाई संविधानसभाको समयावधि बढाउन सकिने बताए ।
अधिकांश समय राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश पोखेर बिताएका उनले आफ्नो मन्तव्य भने नेपाली भाषामै राखे, विगतमा झैँ हिन्दी या मैथिली भाषा प्रयोग गरेनन् ।
'संकटकाल लागू गराई म्याद थप्ने र संविधान संशोधन गरी म्याद थप गर्ने निर्णय मतदानद्वारा गर्नुपर्छ, त्यो कति सम्भव हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ,' उपराष्ट्रपति झाले भने ।
फोरम लोकतान्त्रिककी केन्द्रीय सदस्य आशा चतुर्वेदीद्वारा लिखित 'विभेदका विरुद्ध मेरो संघर्ष' १४ पृष्ठको पुस्तिका विमोचनमा उपराष्ट्रपति झाले १४ जेठभित्र संविधान बन्न नसकी संविधान जारी हुने म्याद पनि थप्न नसकिए मुलुक संविधानविहीन हुनेमा चिन्तासमेत व्यक्त गरे । 'त्यो स्थिति आए राष्ट्रपति शासन या सैनिक शासन लागू हुने अड्कल हुने गरेका छन्,' उपराष्ट्रपति झाले भने, 'तर, राष्ट्रपतिको विषयमा राजनीतिक दलले भने अहिलेदेखि नै १४ जेठमा संविधान नआए राष्ट्रपति पनि खारेज हुने हल्ला चलाएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेका छन् ।' पूर्वनिर्धारित समयभित्र संविधान नआउनु दुखद हुने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेर राजनीतिक दलले देशलाई खाडलमा हालेको उपराष्ट्रपति झाको आक्रोश थियो ।
उपराष्ट्रपति झाले आफ्नो विषयमा निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अक्षम रहेको उनको दाबी थियो । मधेस आन्दोलनपछि सरकारसँग मधेसी भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने सहमति भएको दाबी गर्दै उपराष्ट्रपति झाले मधेसी आन्दोलनको भावनालाई न्यायाधीशहरूले लत्याएको आरोप लगाए ।
« Reply #22 on: July 02, 2018, 08:13:44 AM »